Mari Yakachipa muMutinhimira ichawedzera Vhidhiyo Kubatanidzwa | Martech Zone
Chimwe chezvikonzero nei tatanga iyi vhidhiyo nhepfenyuro kuratidza kuti zviri nyore sei kurekodha uye kutsikisa mavhidhiyo kubatsira yako yakazara kushambadzira zano. Vhura chero yazvino Mac kana PC nhasi uye kune yakavakirwa-mukati kamera uye maikorofoni yakagadzirira kunyora yako inotevera-mineti vhidhiyo Pisa chirongwa chemukati chekurekodha uye woenda! Pane rimwe dambudziko diki, zvakadaro.
Maikorofoni anouya mukati anotyisa chose. Wanga uchiziva here kuti vanhu vanorega kuona vhidhiyo yakakura ine inotyisa odhiyo…. uye wotarisa vhidhiyo ine inotyisa mhando vhidhiyo asi yakanaka odhiyo? Mutinhimira kiyi yekubatanidzwa kwevhidhiyo. Uye haufanire kuita mari hombe mukushandisa odhiyo. Ini ndaida kuzviratidza nekunyora vhidhiyo inotevera.
Takatenga yakachipa lavalier maikorofoni paAmazon… Yakaita $ 60 pamwe nekutakura uye kubata. Iwe unonzwa kumwe kuputika kubva mairi uye zvishoma bassy, ​​asi uchienzaniswa neyemukati maikorofoni pane $ 1,000 XNUMX Apple Thunderbolt kuratidza, ihwohwo husiku nemasikati. Ive neshuwa yekutarisa iyo vhidhiyo yese kuti unzwe mutsauko.
Maikorofoni yakakura yekutanga ndeye Audio-Technica AT2005USB Cardioid Dynamic USB / XLR Microphone uye iri pasi pe $ 100. Isu tinoshandisa iyo podcast, vhidhiyo zvinyorwa uye kunyangwe Skype mafoni. Inotakurika uye iri nyore kutakura newe munzira.
Kana iwe uchinyatsoda kubuda zvese, unogona kutenga akati wandei e Sennheiser EW122PG3-A Kamera Mount Wireless Lavalier Microphone Maitiro uye Zoom PodTrak P4 Podcast Recorder. Izvo chete zvakashata zviripo kana iwe usingakwanise kuvhara mu lavalier maikorofoni kune yako kamera, iwe uchafanirwa kushandisa Zoom rekodhi uye wozobatanidza kumusoro odhiyo uye vhidhiyo gare gare neako vhidhiyo yekugadzirisa software. Izvo zviri kubuda munzvimbo yeyakareruka, hazvo, izvo zvinopesana neizvi zvakateedzana.
Disiki: Ini ndiri kushandisa yangu yakabatana zvinongedzo mukati meichi chinyorwa cheAmazon
Tags: apogee micAudiozvakachipa Lavalier miclavalier maikorofonikurekodha odhiyoakatasva lavalierakatasva lavalier maikorofoniakatasva miczoom digital rekodhi
Maitiro Ekuwedzera Emega Chako Mukana wekusvika kuInbox